Ny sary miloko tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Tianao ve sary miloko mareva-doko? Etsy ambany no hahitanao sary an-tsary miavaka miaraka amin'ny feo manaitra mba hahafahanao manamboatra tanteraka ny fitaovanao Android ary manampy doko loko amin'ny tranonao na lamba fanidiana.
Ataovy miavaka ny findainao Android amin'ireo volavola miloko sy am-boalohany ireo izay hampiavaka azy tanteraka. Safidio ny fiavianao ankafizinao amin'ireo background miloko rehetra ao amin'ny galeriana.
Ity ambany ity misy galerinao feno fiaviana finday na takelaka feno loko
Tianao ve ireo sary miloko miloko? Avy eo ity fizarana ity dia natao ho anao. Safidy lehibe amin'ny sary an-tsary miloko indrindra ho an'ny smartphone Android na takelaka misy anao eny an-tsena. Tsy ny loko ihany no manana andraikitra manokana ao amin'izy ireo, fa ny endrika sy endrika am-boalohany indrindra ihany koa no ahitantsika. Izy rehetra miaraka amin'ny kalitaon'ny sary tsara indrindra.